FAMPAHALALANA SY SARY MITERAKA ALIKA YORANIAN - ALIKA
Fampahalalana sy sary miteraka alika Yoranian
Alika mifangaro mifangaro Pomeranian / Yorkshire Terrier
'Yoshi the Yoranian amin'ny 10 volana, milanja 6 kilao dia alika faly be. Tiany daholo ny olona. Tiany ny milelaka ny tavan'olona rehetra. Yoshi dia afaka matory na aiza na aiza ary amin'ny toerana tsy misy dikany. Isaky ny maheno antsika mody izy dia mandihy foana (mijoro amin'ny tongotra roa ary manetsika ny ranjony eo ambony sy midina toa manao salsa) eo am-bavahady. '
Ny Yoranian, antsoina koa hoe Yorky Pom, dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Pomeranian ary ny Yorkshire Terrier . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Drafitra mpamorona endrika = Yoranian Terrier
'Holly dia fangaro Yorkie Pomeranian !! Nahazo azy isika 19 taona lasa izay. Izy no zazavavintsika !! '
Mifangaro Baily the Pomeranian / Yorkshire Terrier amin'ny 1 1/2 taona
Alika kely Yoraniana Mia Sofia sy Piper Isabella amin'ny 6 herinandro— 'Te hizara aminao ny zanako kely! Mia Sofia (ankavia) sy Piper Isabella (ankavanana) amin'ny 6-herinandro. Alika kely Yoranianina izy ireo. Ny renin'izy ireo dia Pom, ary ny dadany dia Yorkie. Manana ny volo Pom malefaka sy rambony Pom olioly izy ireo. Alika kely milalao izy ireo ary be fitiavana koa! '
Baxter the Yoranian (alika hybrid Pom / Yorkie) amin'ny 10 volana, milanja 10 pounds - Pomeranianina madio ny reniny ary Yorkshire Terrier madio no dadany.
Baxter the Yoranian (alika mifangaro ao Pom / Yorkie) 10 volana, milanja 10 pounds - Pomeranianina madio ny reniny ary Yorkshire Terrier madio no dadany.
Alika kely Yoranianina 16 herinandro - Pom ny reniny ary Yorkie ny rainy. Sary natolotry ny Tender Loving Puppies
Alika kely Yoranian 6 herinandro - Pom ny reniny ary Yorkie ny rainy. Sary natolotry ny Tender Loving Puppies
Reese ilay mix Yorkshire Terrier / Pomeranian mix (Yoranian) 3 volana
Minnie ilay alika kely yorania 9 herinandro
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Yoranian
Sary Yoranian 1
Lisitry ny alika mitambatra Pomeranian
Irlandey wolfhound husky Mix alika kely
ahoana ny endrik'ireo mitsako alika
retriever volamena voaharo ny poodle
Shih Tzu voalavo terrier Mix
pitbull sy husky Mix alika kely